Golaha Shacabka Oo Amniga Dalka Ka Doodi Doona Maalinkii Labaad – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku yeelanaya kulanka 3-aad ee Kalfadhiga 4-aad. Waxayna sii wadi doonaan doodda la xariirta amniga dalka. 27 mudane oo shalay hartay ayaa la filayaa in ay maanta hadlaan.
Guddoomka Golaha Shacabka ayaana shalay ku wargaliyay mudanayaasha in doodad amniga barri la dhammeystiri doonno.
Halkaan ka akhiriso wax walba oo ku saabsan kulankii shalay.
Golaha Shacabka: Kulankii Looga Hadlayay Amniga Dalka Oo Soo Dhammaaday